Droidz စျေး - အွန်လိုင်း DRZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Droidz (DRZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Droidz (DRZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Droidz ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Droidz တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Droidz များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DroidzDRZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0222DroidzDRZ သို့ ယူရိုEUR€0.0189DroidzDRZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.017DroidzDRZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0204DroidzDRZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.2DroidzDRZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.141DroidzDRZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.495DroidzDRZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0834DroidzDRZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0296DroidzDRZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0311DroidzDRZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.498DroidzDRZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.172DroidzDRZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.119DroidzDRZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.66DroidzDRZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.76DroidzDRZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0305DroidzDRZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0338DroidzDRZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.691DroidzDRZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.154DroidzDRZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.37DroidzDRZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩26.31DroidzDRZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8.61DroidzDRZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.63DroidzDRZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.615
DroidzDRZ သို့ BitcoinBTC0.000002 DroidzDRZ သို့ EthereumETH0.00006 DroidzDRZ သို့ LitecoinLTC0.000416 DroidzDRZ သို့ DigitalCashDASH0.000258 DroidzDRZ သို့ MoneroXMR0.000258 DroidzDRZ သို့ NxtNXT1.81 DroidzDRZ သို့ Ethereum ClassicETC0.00327 DroidzDRZ သို့ DogecoinDOGE6.72 DroidzDRZ သို့ ZCashZEC0.000286 DroidzDRZ သို့ BitsharesBTS0.856 DroidzDRZ သို့ DigiByteDGB0.734 DroidzDRZ သို့ RippleXRP0.0801 DroidzDRZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000784 DroidzDRZ သို့ PeerCoinPPC0.0743 DroidzDRZ သို့ CraigsCoinCRAIG10.37 DroidzDRZ သို့ BitstakeXBS0.97 DroidzDRZ သို့ PayCoinXPY0.397 DroidzDRZ သို့ ProsperCoinPRC2.86 DroidzDRZ သို့ YbCoinYBC0.00001 DroidzDRZ သို့ DarkKushDANK7.3 DroidzDRZ သို့ GiveCoinGIVE49.24 DroidzDRZ သို့ KoboCoinKOBO5.18 DroidzDRZ သို့ DarkTokenDT0.0204 DroidzDRZ သို့ CETUS CoinCETI65.65
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 02:55:02 +0000.